လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ရင်းထိန်းသိမ် ခံရတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသား တွေ ကိုအ​မြန်ဆုံးလွတ်မြောက်အောင် ဝန်း ရံပေးကြဖို့ တောင်းဆိုလာခဲ့တဲ့ ပိုး မ မှီသာ – XB Media Myanmar
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ဆရာဝန်မလေးဖြစ်တဲ့ ပိုးမမှီသာ ကတော့ လတ် တလောမှာ ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အတူ တစ်သားတည်း အပြည့်အဝရပ်တည်ပေးခဲ့ပြီး တ က်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကူညီပေးခဲ့သလိုတိုင်းပြည်အတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ လမ်းမပေါ် ထွက်ပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ယခုမှာဆိုရင် ပိုးမမှီသာ လူထုလှုပ် ရှား မှု မှာ ပါဝင်ရင်း ထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက် အော င် ဝန်းရံပေးကြဖို့ တောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။
“ဆေးကျောင်းသား ၊ ဆရာဝန်တွေ လွတ်လာပြီဆိုပေမယ့်…UFL ကျောင်းသားတွေ အင်ဂျင်နီ ယာ ကျောင်းသားတွေ ဆရာ/ဆရာမတွေ ခုထိမလွတ်သေးဘူးကြားပါတယ် ..မကွေးက မကွေး ဆေးကျောင်းသားတွေရော ဝိုင်းပြီးဝန်းရံပေးကြပါဦး အားလုံး တစ်သားတည်းပါ …..
ဆေး ကျော င်း သားများနည်းတူ အဖမ်းဆီးခံရသူများကို ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးပါ…. ကျောင်း သား တိုင်း ဒီ အရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့ သူတိုင်း တန်ဖိုးရှိပါတယ် ….ကျောင်းသားတွေ ဖမ်းဆီးခံ ရသူတွေ ရှေ့ မှာ ဆရာကြီးတွေ မရပ်ပေးနိုင်တဲ့အခါ ကိုယ်ကျောင်းသားအချင်းချင်း ပြည်သူအ ချင်းချင်းက ဖိ အားပေးပြီးရပ်တည်ပေးကြရမှာပါ …..
လွတ်လာပုံလေးအကူအညီရလိုရငြားပါ …..ဆေးကျောင်းကတော့ နီးစပ်ရာတွေကနေ ဖမ်းဆီးခံ ရသူစာရင်းကို ကျောင်းသမဂ္ဂကသေချာအတိအကျစုပါတယ် ……အချုပ်ကားနောက်က မျက်ချေ မပျက်လိုက်တဲ့သူလိုက်ရင်း ဘယ်ပါသွားမလဲ ထောက်လှမ်းပါတယ်
…..နေရာသိရပြီဆိုတဲ့အခါ ရှေ့နေတွေရယ် ကျောင်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာဆရာကြီး ဆရာမကြီးတွေရ ယ်က လိုက်လာပြီးရအောင်ကြိုးစားပါတယ် …သိတဲ့နေရာကိုအကုန်ဝန်းရံရင်း အားလုံးကလည်း pressure ဝိုင်းပေးရင်းနဲ့ လွတ်လာတာပါ ” ဆိုပြီး ရေးသားပါတယ်။ ကဲ…ပရိသတ်ကြီးလည်း ထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားတွေအတွက် အပြည့်အဝ ရပ်တည်ပေးလိုက်ပါဦး။
သတင်းအရင်းမြစ်: Source – Poe Mamhe Thar fb Acc
ပရိသတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သလို ဆရာဝန္မေလးျဖစ္တဲ့ ပိုးမမွီသာ ကေ တာ့ လတ္ တေလာမွာ ျပည္သူျပည္သားေတြနဲ႔အတူ တစ္သားတည္း အျပည့္အဝရပ္တည္ေ ပးခဲ့ၿပီး တ က္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန ကူညီေပးခဲ့သလို တိုင္းျပည္အတြက္ တစ္ေထာင့္တ စ္ေ နရာကေန လမ္းမ ေပၚ ထြက္ၿပီး လူထုလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါဝင္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတ ယ္။ ယခုမွာဆိုရင္ ပိုးမမွီသာ လူထုလႈပ္ ရွား မႈမွာ ပါဝင္ရင္း ထိန္းသိမ္းခံရတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို အျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္ ေအာ င္ ဝန္းရံေ ပးၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုလာခဲ့ပါတယ္။
“ေဆးေက်ာင္းသား ၊ ဆရာဝန္ေတြ လြတ္လာၿပီဆိုေပမယ့္…UFL ေက်ာင္း သားေ တြ အင္ဂ်င္နီ ယာ ေက်ာင္းသားေတြ ဆရာ/ဆရာမေတြ ခုထိမလြတ္ေသးဘူး ၾ ကားပါတယ္ ..မေကြးက မေကြး ေဆးေက်ာင္းသားေတြေရာ ဝိုင္းၿပီးဝန္း ရံေ ပး ၾကပါဦး အားလုံး တစ္သားတည္းပါ …..
ေဆး ေက်ာ င္း သားမ်ားနည္းတူ အဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားကို ခြၽင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေ ပး ပါ…. ေက်ာင္း သားတိုင္း ဒီ အေရးေတာ္ပုံမွာပါဝင္တဲ့ သူတိုင္း တန္ဖိုးရွိပါတယ္ ….ေက်ာင္းသားေတြ ဖမ္းဆီးခံ ရသူေတြ ေရွ႕ မွာ ဆရာႀကီးေတြ မရပ္ေ ပးႏိုင္တဲ့အခါ ကိုယ္ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း ျပည္သူအ ခ်င္းခ်င္းက ဖိ အားေ ပးၿပီးရပ္တည္ေပးၾကရမွာပါ …..
လြတ္လာပုံေလးအကူအညီရလိုရျငားပါ …..ေဆးေက်ာင္းကေတာ့ နီးစပ္ရာေတြကေန ဖ မ္းဆီးခံ ရသူစာရင္းကို ေက်ာင္းသမဂၢက ေသခ်ာအတိအက်စုပါတယ္ ……အခ်ဳ ပ္ကားေနာက္က မ်က္ ေခ် မပ်က္လိုက္တဲ့သူလိုက္ရင္း ဘယ္ပါသြားမလဲ ေထာက္လွမ္းပါတယ္
…..ေနရာသိရၿပီဆိုတဲ့အခါ ေရွ႕ေနေတြရယ္ ေက်ာင္းနဲ႔သက္ဆိုင္ရာဆရာႀကီး ဆ ရာမႀကီးေတြရ ယ္က လိုက္လာၿပီးရေအာင္ႀကိဳးစားပါတယ္ …သိတဲ့ေနရာကိုအကုန္ ဝ န္း ရံရင္း အားလုံးကလည္း pressure ဝိုင္းေပးရင္းနဲ႔ လြတ္လာတာပါ ” ဆိုၿပီး ေရးသားပါတယ္။ ကဲ…ပရိသတ္ႀကီးလည္း ထိန္းသိမ္းခံရတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ေ က်ာင္းသားေတြအတြက္ အျပည့္အဝ ရပ္တည္ေပးလိုက္ပါဦး။
သတင္းအရင္းျမစ္: Source – Poe Mamhe Thar fb Acc